यी समाजिक सञ्जालले तपाईंका यस्ता गोप्य कुरा थाहा पाउँछन् | Makalukhabar.com
जेठ २९ । इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, सर्फिङ साइट तथा एप्स चलाउँदा तपाईंले थाहै नपाई आफूबारेका सूचना दिनुभएको हुन्छ। के कहिल्यै सोच्नुभएको छ, तपाईंबारे ठूला डिजिटल प्राविधिक कम्पनीले केके थाहा पाइरहेका हुन्छन् ?
यी कम्पनीले तपाईंका निम्न सूचना जानिराखेका हुन्छन्ः
नाम, लिंग, जन्ममिति, फोन नम्बर, इमेल ठेगाना, स्थान, सम्बन्धको स्थिति (विवाहित, अविवाहित), काम, आय, शिक्षा, जाती, धार्मिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, आइपी एड्रेस, च्याट।
फोन नम्बर, स्थान, इमेल ठेगाना, आइपी एड्रेस ।
नाम, लिंग, जन्ममिति, फोन नम्बर, इमेल ठेगाना, स्थान, काम, शिक्षा, कन्ट्याक्टस, गुगलमा खोजिएका सामग्री, यु ट्युवमा हेरिएका सामग्री ।
नाम, लिंग, जन्ममिति, फोन नम्बर, इमेल ठेगाना, स्थान, आईपी एड्रेस, इमेल, कन्ट्याक्टस, फोन कल, च्याट, हेरिएका भिडियो । एजेन्सी
गुठी विधेयकबारे प्रकाशमानः निजी सम्पत्तिलाई राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास
भाद्र १ । हामी कस्तो मानिससँग जोडिएका छौँ भन्ने कुराले सताउने गर्छ । किनकी कुनैपनि सम्बन्ध राम्रो हुन दुवैको समान भूमिका र जिम्मेवारी रहेको हुन्छ ।उही पुरानै उखानको याद आउँछ कि ‘एक हातले ताली बज्दैन’ । र मानिस कस्तो मान्छेको साथमा बाँकी जीवनको सुनौलो कल्पना गर्दैछ भन्ने कुराले उसलाई बेलाबेलै गम्भीर... जारी राख्नुहोस...
साउन ३१, काठमाडौँ । समबन्धलाई मानिसहरु मुठ्ठीभित्र रहेको पुतलीसँग तुलना गर्छन् । मुठ्ठी बेस्सरी कस्नुभयो भने पुतली मर्छ, खोल्नुभयो भने उडेर भाग्छ ।सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो, एक – अर्कालाई केरकार बढी गरियो भने भित्रभित्रै सम्बन्धमा चिसोपना आउँदै जान्छ भने स्वतन्त्र छोडिदियो भने कता पुगिसक्छ थाहा नै हुदै... जारी राख्नुहोस...
आफ्नो हुनेवाला जीवनसाथीसँग यी ५ प्रश्न सोध्न आवश्यक
साउन ३० । तपाईं कस्तो वातावरणमा हुर्किनु भयो र कस्तो शिक्षा–दिक्षा पाउनु भयो भन्ने कुराले पनि तपाईको भविष्य निर्धारण गर्छ । यही कारण पछि गएर सम्बन्धमा असमझदारी, तनाव, झगडा हुने गर्दछ । यसको मूख्य कारण भनेको अक्सर पैसा हुने गर्दछ । यस्तोमा बिवाह अगाडि नै फाइनान्सियल विषयमा खुलेर कुराकानी गर्नु... जारी राख्नुहोस...
गर्मीमा परफेक्ट लुक्सकाे लागि यस्तो फेशन गर्नुस्
साउन २८ । फेसन पारखीहरु हरेक मौसममा उनीहरु आफूलाई फेसनेवल राख्न तत्पर रहन्छन् । अहिले गर्मी संग-संगै मनसुनको मौसम भएको हुनाले हरेक दिनजसो पानी परिरहेको छ । यो मौसममा कस्तो फेसन गर्ने त ? यसपटकको गर्मी मौसममा लाइट रंग भन्दा पनि ब्राइट कलर का पहिरनहरु बढी फेसनमा छन् । गर्मीमा हल्काफूल्का रंगभन्दा गाढ... जारी राख्नुहोस...
तपाईलाई बैंकमा जागिर खान मन छ ? त्यसो भए तपाईमा यी गुन हुनु आवश्यक
साउन २७ । प्रत्येक स्थानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग असल गुण हुन् जरुरी छ l तर बैङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूसँग भने विशेष गुण हुन् अति आवश्यक पर्दछ l अन्य क्षेत्र भन्दा बढी लगाव चाहिने यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा निम्नलिखित गुणहरू हुनु आवश्यक पर्छ l इमानदारिताबैङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरू इ... जारी राख्नुहोस...
साउन २६ काठमाडौं । यदि तपाइँले अश्लिल भिडियो र तस्विर हेर्ने गर्नु भएको छ भने एक पटक पढ्नुस् । निरन्तर अश्लिल चलचित्र हेर्नेहरुमा यौन उत्तेजनाको हिसावले निक्कै राम्रो प्रभाव पर्ने सकारात्मक र कतिपय यौनिक समस्या आउने नकारात्मक परिणाम हुने एक अध्यनले देखाएको छ । यौन उत्तेजनाको हिसावले अश्लिल चलचित्र... जारी राख्नुहोस...
यस्ताे छ पानीबाट चल्ने बाइक
साउन २४ । इन्धको बढ्दो खपतसँगै बढेको व्यवभार तथा धुवाँले वातावरणमा पारेका प्रभावलाई हेर्दा जो सुकै मानिसहरु पनि यो सोच्दछन् की यदि पानीबाट गाडी चल्ने भए कस्तो होला र ? यस्तो सोचाई कोरा कल्पना मात्रै लाग्नसक्छ । तर, अब यो कल्पना तथा सपना मात्र रहेन, यथार्थ बनिसकेको छ । ब्राजिलको साओपाओलोमा रहने रिका... जारी राख्नुहोस...
साउन २३ । मानिसको दैनिकी समय परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुन्छन् । खुसी हुँदा देखाउने व्यवहार, दुःखी हुँदा गर्ने काम तथा सम्बन्धमा रहँदा र सम्बन्धबाट टाढिँदा हुने व्यवहार सबैको फरक फरक हुन्छ । आज हामी प्रेमिल सम्बन्धमा रहेर ब्रेकअप भएपछि केटीहरुले गर्ने व्यवहार कस्तो होला भन्ने आँकलन गरिन्छ । केटीहरु... जारी राख्नुहोस...
पूर्व प्रेमलाई बिर्सन अपनाउनुस् यी टिप्स
साउन २२ । के तपाईँ आफ्नो पूर्व प्रेमलाई भुलेर जीवनमा अगाडी बढ्न चाहनु हुन्छ ? यदि चाहनुहुन्छ भने अपनाउनुहोस् यी उपायहरू जसले तपाइको पूर्व प्रेमको यादलाई बिर्सी जीवनमा अगाडी बढ्न सिकाउँदछ l सकारात्मक सोच्ने गर्नुहोस् :यदि तपाईँ आफ्नो पूर्व प्रेमलाई भुल्न चाहनुहुन्छ भने सकारात्मक सोच्ने गर्नुहोस् l ज... जारी राख्नुहोस...
अब पिशावबाटै स्मार्ट फोन चार्ज गर्नुस्
साउन २० ।तपाईलाई अचम्म लाग्नु स्वभाविक हो कि पिशावबाट नै स्मार्ट फोन चार्ज हुन्छ भनेर ! तर, यसलाई सम्भव तुल्याउनका लागि अध्ययन भने सुरु भइसकेको छ । जुन अध्ययन अनुसन्धान एउटा अनौठा लग्दो विषय हो । तर, पिशावबाट विजुलीको करेन्ट निकाल्नको लागि बेलायतका वैज्ञानिहरु जुटेका छन् । बेलायतको ब्रिस्टल रोबोटि... जारी राख्नुहोस...